UMnyango uthi omasipala abakhokhele u-Eskom imali yawo | isiZulu
UMnyango uthi omasipala abakhokhele u-Eskom imali yawo
'U-Eskom ungawunqamula ugesi komasipala abakweletayo'
Bangase badlele uKhisimusi ejele ‘abantshontshe’ amakhebuli ka-Eskom
Libagojele abebesolwa ngamacala okukokotela ugesi
Pretoria – UNgqongqoshe woMnyango wezokuBusa ngokuBambisana kanye neziNdaba zoMdabu, uDes van Rooyen, uthi omasipala kumele bahlale njalo bekhokhela ama-account abo akwa-Eskom ukugwema ukuphazamisa amabahlali abawukhokhelayo ugesi.
UNgqongqoshe ubephundula mayelana nezinselelo ezibhekene nabanye bomasipala zokukhokhela ama-accounts abo ngoLwesibili.
OLUNYE UDABA: Libagojele abebesolwa ngamacala okukokotela ugesi
“Kubalulekile komasipala abasezweni ukuthi bahlale bekhokhela ama-account abo ukuze bangahlukumezi lawo malungu omphakathi lapho ehlezi khona azikhokhelayo izinsiza zawo,” kusho uNgqongqoshe uVan Rooyen.
Lo Mnyango uthi phezu kwemizamo esibekiwe yokunciphisa izikweletu, okubalwa nokuhlolwa kokuthi izinhlelo ziyaqaliswa yini, abanye omasipala bayaqhubeka nokwephula izivumelwano ezenziwa uMnyango no-Eskom.
U-Eskom usanda kuxwayisa omasipala ukuthi bazonqanyulelwa ugesi uma bengakhokhi nokwaholela ekutheni i-Afriforum ifake u-Eskom enkantolo ngenhloso yokuvimba le nkampani ephakela ugesi ukuthi iwucime. Kodwa-ke isinqumo senkantolo savuna u-Eskom ngokuthi unqamule ugesi komasipala abakweletayo.
Centurion - 06:59:34 AM HEAVY TRAFFIC towards Ashwood Drive Ezinye zasemigwaqeni